Mile okႀကိဳက္​ — Steemkr
စတင်ဖို့။ 1939 ခုနှစ်တွင်ဦးဆောင်သီအိုရီကွဲအက်သံကိုဒါခေါ် articular လွှတ်ပေးရန်-အခါပူးတွဲအချို့ထောင့်မှာတစ်ခုသို့မဟုတ်အချို့သောဒီဂရီမှချိန်ညှိသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်အဆစ်ဝန်းကျင် fibrous ဆေးတောင့်တစ်တင်းကျပ်၏ရလဒ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ 1947 ခုနှစ်တွင်, ထိုအဆစ်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်. ပြောင်းရွှေ့ကြသောအခါအသံကကွဲအက်လက်မှတ်တစ်ရှူးများတွင်တုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့သီအိုရီမှလမ်းကိုပေး၏။ VideoCOMING UP Play ... သင့်ကျန်းမာရေးကိုသနျ့ရှငျးတှေ5လွယ်ကူနည်းလမ်းတွေ ဒါပေမယ့်ကလက်ခေါက်ဆစ်-ကွဲအက်လယ်ကွင်းလိဒ်၏ University မှသုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လက်ခေါက်ဆစ်-ကွဲအက် encloses နှင့်အဆစ်ကာကွယ်ပေးသည်သောစေးအတွက်ပူဖောင်း၏ပြိုကျကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်း
ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်သည့်အခါယင်း၏ယူရီကာယခုအချိန်တွင်ခဲ့ကြောင်း 1971 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသီအိုရီပူဖောင်းအာပ်ပေါ်လာခဲ့သည့်ခဲ့ကြပြီးပထမဦးဆုံး-form ကိုပြန်လည်ရမယ်လို့အကြံပြုခြင်း, အသစ်အက်ထားပြီးတဲ့လက်ခေါက်ဆစ်မိနစ် 20 ပျမ်းမျှအဘို့အ re-အက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, အထူးသဖြင့်ကတည်းကအသိတစ်ဦးအခြို့သောငွေပမာဏကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 2015 ခုနှစ်တွင်, သို့သော်, ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျကနေသုတေသီတစ်ဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကသူတို့ပင်အက်ကွဲပြီးနောက်ပူးတွဲအတွက်ပူဖောင်းဆက်လက်ရှိကြောင်းပြသနိုင်ဖို့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အသုံးပြုခဲ့သည့်အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ pop မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုသူတို့ဆူညံသံစေသလဲ? မေးခွန်းအခြေချရန်,
များ၏အခြေစိုက်စခန်းမှာပူးတွဲတ၏ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကြောင်းကို virtual လက်ခေါက်ဆစ်အသုံးပြုခြင်း, သုတေသီထို့နောက်အရည်အတွက်ဗတ္တိဇံကိုအစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်များအကြားအဆက်အသွယ်များ tribonucleation-The ချမှတ်ခြင်းနှင့်ကြေကွဲအဖြစ်လူသိများလုပ်ငန်းစဉ် simulated ။ အလှည့်ပုံစံများအတွက်သှသောနေရာများအတွက်ပိတ်မိနေသည့်စေးအတွက်လျှော့ချဖိအားမှဦးဆောင်သည့် MCP ပူးတွဲ touch နှင့်သီးခြားအားလုံးကာလ၌အရိုးတို့သည်အ။ ဒီအသံ ammo အဆိုပါလက်ခေါက်ဆစ်သို့တင်ဆောင်ထားပြီးပြီးတာနဲ့သင်ဆဲကပစ်ခတ်ဖို့ရှိသည်။ ထိုသို့ဖွစျပုံကိုလေ့လာရန်, စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း, Rayleigh-Presset ညီမျှခြင်းအဖြစ်လူသိများရဲ့အရာပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတဲ့ပုံသေနည်းအားကိုး "incompressible အရည်တစ်ခုအဆုံးမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးအလင်းဆုံပူဖောင်း၏ဒိုင်းနမစ်အုပ်ချုပ်။ "
သူတို့ကသူတို့မော်ဒယ်မှ Rayleigh-Presset ဆက်ပြောသည်သည့်အခါနှင့် သူတို့ crack သည့်အခါအမှန်တကယ်လက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်သောလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ကို virtual လက်ပြောင်းရွေ့, သင်္ချာပူဖောင်းသင့်လျော်သောအသံထုတ်လုပ်မယ်လို့ပဲထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြိုကျ။ ဒီတော့ပြဿနာကိုလက်ျာဘက်, ဖြေရှင်း? အတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် 1971 သုတေသီများပြီးသားဆိုခဲ့သောအရာကိုသက်သေပြခဲ့သည်ကဤအချက်မှာပြုမိခဲ့သည်။ အဘယ်အရာပူဖောင်းအက်ကွဲပြီးနောက်လက်ခေါက်ဆစ်အတွက်နေရစ်သော disproof-နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်များကော? သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှန်ပါသည်, ပူဖောင်းပြိုကျ, ဒါပေမယ့်: အသစ်မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းကြောင်းဖွကွေား။ မပြည့်စုံလျှင် MRIs နေဖြင့်တွေ့ရှိခံရဖို့နောက်ကွယ်မှအလုံအလောက်ပူဖောင်းထွက်ခွာနေစဉ်ရုတ်တရက်သည်, ပူဖောင်း၏ကျုံ့တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူကွားနိုငျသောအသံထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာမည့်အက်ကွဲများအတွက်ကြာနှစ်ဆယ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒါကြောင့်အသစ်ကပူဖောင်းဖန်တီးကျန်ရစ်သူသူတွေကိုချဲ့ထွင်ရန် tribonucleation ကြာကာလဖြစ်၏။ နောက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်-ဘယ်လိုဏုဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်မဖြစ်နိုင်သောအမှန်တကယ်အလွယ်ကူဆုံးတဦးတည်းကျယ်လောင်-ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အသံကထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ တည်ဆဲ acoustic ဖိအားညီမျှခြင်းဟာပူဖောင်းပြိုကျအမြန်နှုန်းကဖြစ်ပျက်-The သောပတျဝနျးကငျြသွေ့ခြောက်သောအရိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးထားသည့် enclosing အမဲသားက 83 ဒက်စီဘယ်ယူနစ်ရောက်ရှိတဲ့အက်ကွဲထုတ်လုပ်ရန်လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းပြသပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးက virtual အသံလှိုင်းများဖမ်းမိအမှန်တကယ်လှိုင်းတံပိုးမှထုတ်လုပ်သူတို့၏သင်္ချာလက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လက် crack သည့်အခါ graphed အခါ။ 50 ပေအကွာအဝေးကနေကြားသိ 40 တစ်နာရီမိုင်မှာရွေ့လျားနေတဲ့ဒီဇယ်ထရပ်ကား၏အသံအတိုးအကျယ်မှအကြမ်းဖျင်းညီမျှသည်သဲလွန်စခဲ့ကြသည် နီးပါးတူညီ။ ဤလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့ application ကိုချက်ချင်းထငျရှားပါသညျ။ ဒါဟာအိုကေဒါထင်ရှားမယ့် ... um, ပါပဲ။ အဆိုပါသုတေသီများနည်းလမ်းများသူတို့ devel တွင်ရှိသည်သောအကြံပြုကြပါ